ကြက်ထမင်းပေါင်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကောက်ရိုးမှို / ကြွက်နားရွက်မှို
ဘိုစားပဲ / ရွှေပဲသီး
ပြောင်းဖူးသေးသေး ( baby corn )
ရေနွေးဆူဆူမှာ ရေနွေးဖျော ပြီးရေအေးလောင်းအအေးခံထားပါ..။
ကြက်သွန်ဖြူ ၃ တက်လောက်ကိုဓါးပြားရိုက်ထည့်ကြော်ပြီး..ကြက်သားပါးပါးလှီးကိုထည့်ပါ။
ရေနွေးဖျောထားတဲ့ ဟင်းသီး/ ရွက် တွေထည့်ပြီးကြော်ပါ။
ကြက်ပြုတ်ရည်(သို.)ရေ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)လုံးစာလောက်ထည့်ပြီး..ပဲငံပြာရည်အကြည် ၊ ဆား၊ သကြား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်. ၊ခရုဆီတို.နှင့်အရသာသွင်းပါ။
ပြောင်းမှုန်.လေးဖြင့်..မပျစ်မကျဲလေး ဆွဲကာ ထမင်းပူပူ အနည်းငယ်ပေါ်
လောင်းချ လိုက်ရင် မြန်မာပြည်ကရောင်းတဲ့ ထမင်းပေါင်း ရပါပြီ...။